Tsy afa-mandositra, Fiangonana Eran-tany Manerantany Switzerland (WKG)
Ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra taloha ho an'ny vovony fandroana dia mampiseho vehivavy manelingelina aorian'ny andro be atao, fifamoivoizana, faktiora, fanasan-damba, sns. Misento izy: esory aho, Calgon! Nivadika tany amin'ilay vehivavy izay milamina sy faly ao am-pandroana ny sehatra, raha toa kosa ny tabataba amin'ny zanany eo akaikin'ny varavarana.
Tsy ho tsara ve raha afaka manala ny fahasahiranantsika fotsiny isika ary manasa azy ireo amin'ny rano miaraka amin'ny rano fandroana? Mampalahelo fa ny fanadinantsika sy ny olantsika matetika dia matanjaka noho ny hoditray ary tsy mora sasana. Toa tsy mifikitra aminay.
Niresaka i Mother Theresa indray mandeha fa "tsy eo am-pandriana amin'ny raozy ny fiainany". Azontsika atao fotsiny ny manamarina tanteraka an'io fanambarana io, na dia nanandrana nanao ny anjarako aza aho tamin'ny fambolena kirihitra maintso tao amin'ny zaridainako.
Ny fisalasalana, ny fahadisoam-panantenana sy ny alahelo rehetra dia tonga amintsika. Manomboka izy ireo amin'ny mbola kely ary miara-dia amintsika mandra-pahatongan'ny vanim-potoana volamena. Mianatra miatrika fisalasalana, fahadisoam-pananana sy alahelo ary hiaina azy ireo.
Fa maninona ny sasany no toa afaka mahavita tsara ireo tsy azo ihodivirana kokoa noho ny hafa? Ny fahasamihafana, mazava ho azy, dia miorina amin'ny zavatra inoantsika. Ny zava-mahatsiravina dia mbola mahatsiravina ihany, saingy ny finoana dia afaka manala ny alahelo.
Ny finoana tsy manala ny olantsika ary tsy mitohy ny fanaintainana. Isika kosa mahalala sy matoky an'izay nanome ny fiainany ho antsika. Niaritra fanaintainana bebe kokoa noho izay tsy azontsika an-tsaina mihitsy izy. Afaka miaraka amintsika amin'ny fanaintainana izy.
Mandrosoa ary andraso fandroana lava sy lava ity. Mandrehitra labozia, mihinana sôkôla ary vakio ny mpitsangantsangana tsara. Ka rehefa mivoaka avy ao anaty dobo ianao dia mbola misy ny olana, fa eo koa Jesosy. Tsy misintona anay izy io, araka ny filazan'ny Calgon, saingy tsy mandeha ao anaty tatatra ihany koa izy io. Ho eo foana Izy.